पत्रकारिताको आबरणमा ठगीधन्दा चलाउने पाठक यसरी पक्राउ परे - Kantipath.com
पत्रकारिताको आबरणमा ठगीधन्दा चलाउने पाठक यसरी पक्राउ परे
काठमाडौं । खल्तीमा नेपाल पत्रकार महासंघको कार्ड बोकेर पत्रकारिताको आबरणमा विभिन्न अबैधन्दा चलाउदै आएको दिपक पाठक अन्नत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
रेडियो नेपालको बोर्ड सदस्य समेत रहेका दीपक पाठक पक्राउलाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले विद्युतीय अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी निरज शाहीका अनुसार पाठकले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सामाजिक सञ्जालबाट गाली गलौज गरेको आरोपमा पाठकलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लिदै विभिन्न सरकारी निकायमा नियुक्ति भई अबैधधन्दा चलाउदै आएका कारण तत्कालिन समय अर्थात २०७३ बैंसाकमा झुटो विवरण पेश गरेर प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्य पदमा समेत पाठक मनोनित भएका छन् । तत्कालिन एमाले नेता एवं सञ्चारमन्त्री शेरधरन राई र पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीसमेतले विरोध गर्दागर्दै प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका पाठकलाई काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्ती भएसंगै उनको अबैधधन्दाको खुलासा भएको थियो ।
सरकारले अभियुक्त पाठकलाई काउन्सिलको सदस्य बनाएलगत्तै गैरुकानुनी रुपमा विद्यमान ऐन विपरित पत्रिकामा तथ्यहिन समाचार लेखेपछि काउन्सिले वर्गिकरणबाटै हटाएर लोकल्याणकारी विज्ञापन समेत रोकेको थियो । तर सो समयमा प्रधानमन्त्रीकै नाम भजाउदै राष्ट्रको ढुकुटीबाट ९ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।
जिल्ला झापा घर भएका पाठक ठगी प्रकरणमा ‘नटवरलाल’ का रुपमा चिनिन्छन् । उनी प्रहरीको खोजी सूचीमा छन् । पाठकको अपराधकर्मका फाइलहरु यतिबेला अदालत, प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागदेखि प्रहरी कार्यालयमा समेत सुरक्षित छन् ।
तत्कालिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले पाठकको नाममा आएका सवै फाईल बदर गरेपनि पार्टीकै ठाडो आदेशमा रकम असुली गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डका तर्फबाट प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले छानबिन र कारवाहीका लागि प्रेस काउन्सिलमा केही दिन अघि उजुरी दायर गरेका थिए । काउन्सिलले छानबिनपछि कारवाहीका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरेको थियो । मन्त्रालयले पाठकलाई यो विषयमा स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो ।
को हुन् दीपक पाठक ?
झापाली पाठकले सुरुमा मार्गदर्शन नामको मासिक पत्रिका निकाल्थे । पछि उनले तत्काली प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङ, नेपाल वायु सेवा निगमका सुगतरत्न कंशाकार, सामसुङका व्यवसायी दीपक मल्होत्रा, राजस्व अनुसन्धानका भरत सुवेदी र सशस्त्र प्रहरीका एआइजीरआइजीपी लगायतसँग ब्याकमेलिङ गरेको उजुरी प्रेस काउन्सिलमा पर्याे ।
पत्रकारको भेषमा भीआइपीहरुलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेको र राजधानीमा आलिशान घर बनाएको उजुरी परेपछि प्रेस काउन्सिलले पाठकमाथि छानविन सुरु गर्याे । काउन्सिलले छानविन थालेपछि पाठकले प्रेस काउन्सिलकै पदाधिकारीको चरित्र हत्या गर्दै मार्गदर्शनमा लेख्न थाले । अन्ततः काउन्सिलले पाठकको पत्रिका मार्गदर्शनलाई प्रेस काउन्सिलको दफा ११ लगाएर कारवाही गरेको थियो ।
पाठकको पत्रिकाले सरकारबाट पाउँदै आएको सुविधा रोक्का भएको थियो । उनको पत्रिका वर्गीकरणबाट हटाएको थियो । पत्रिका प्रकाशनसँगै पाठकले ट्राभल एजेन्सीसमेत खोलेर सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।
आफू कारवाहीमा परेपछि पाठकले प्रेस काउन्सिलमा पुगेर कार्यालयमा तोडफोड गर्नुका साथै काउन्सिलका पदाधिकारीमाथि हातपात गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई प्रहरीले समातेर हिरासतमा राखेको थियो । ६ दिन थुनामा बसेपछि उनले माफी मागेर थुनामुक्त भएका थिए । तर, उनको पत्रिकामाथि काउन्सिलले गरेको कारवाही यथावत रहेको छ । उनको यो कारवाहीलाई अदालतले समेत सदर गरिसकेको छ ।
माफी मागेर थुनाबाट मुक्त भएपछि पनि पाठकको धन्दा उस्तै रहेको थियो । उनले ग्लोबल बैंक, मेघा बैंक आदिमा बाउन्स चेक दिएर मानिसहरुलाई ठगेको अर्को उजुरी आएको छ ।
पाठकलाई काउन्सिलमा लैजान सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई आग्रह गर्दा राईले उनी आपराधिक छविको भएको र काउन्सिलबाटै कारवाहीमा परेको व्यक्तिलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्य बनाउन नसकिने भनेपनि अस्वीकारेका थिए ।
तत्कालिन सयमा गोकुल बास्कोटाले त अपराधिक चरित्रको पाठकलाई काउन्सिलको सदस्य बनाइएमा म बालुवाटार नै छिर्दिँन भनेर चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
पाठकको सरकारी सुविधा रोक्का भएवापतको ९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णयसमेत गरेको छ । काउन्सिलको कारवाहीका कारण उनको पत्रिकाको सुविधा रोक्का भएको थियो । सरकारको स्वायक्त निकायले गरेको कारवाहीलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेर पाठकलाई ९ लाख उपलब्ध गराएको हो ।
बाँकी ६ लाखको फाइल अर्थमै रहेको छ । अब आफैं प्रेस काउन्सिलको सदस्य भइसकेपछि पाठकले कसरी पीत पत्रकारिता र ब्ल्याकमेलिङलाई नियन्त्रण गर्लान् ? यो सम्झेर एमाले निकट पत्रकारहरु एवं केपी ओलीका प्रशंसकहरु नै जिल्ल परेका छन् । अहिले पाठकको पत्रिकाको धन्दा बन्द छ । tibrakhabar
Previous Previous post: सांसदलाई धम्की : ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर नगरे जेपनि हुनसक्छ
Next Next post: किन एकाएक प्रचण्डको प्रस्तावमा विप्लबले समर्थन जनाए ?